Xildhibaanno sheegay inuu dhamaaday Khilaafkii Baarlamaanka iyo Madaxweynaha Hirshabeelle – Kalfadhi
Xildhibaanno ka tirsan Golaha Wakiillada Hirshabeelle ayaa u sheegay Kalfadhi in uu Madaxweynaha Hirshabeelle, Maxamed Cabdi Waare, ku guuleystay xallinta khilaafkii kala dhaxeeyey Baarlamaankii soo doortay. Guddoomiyaha Guddiga Maaliyadda, Qorshaynta Xiriirka Caalamiga ah iyo Tirakoobka Baarlamaanka , Xildhibaan Muqtaar Xasan Maxamed, oo ka tirsan golahaas, ayaa sheegay in sababta ugu weyn ee Waare ku riixday isku-shaandheynta uu ku sameeyey Golihiisa Wasiirada ay tahay markii, sida uu hadalka u dhigay, ay xukumaddiisu noqotay “fadhiid”.
“Markii ay wax dhaqaajin waayeen wasiiradii hore ayaa loo baahday isku-shaandhayntan” ayuu Xildhibaan Muqtaar ku yiri Kalfadhi. Madaxweyne Waare ayaa shalay xukumaddiisa ku kordhiyey xubno kale, oo uu kaga soo daray Baarlamaanka, waxaana uu arrinkaas isaga dejinayaa Xubnaha Baarlamaanka ee ku kacsan dowladdiisa, sida ay Mudanayaasha qaar qabaan.
Xildhibaan Maxamed Bashiir Daqarre ayaa isna u sheegay Kalfadhi in ay Golaha Wakiilladu ku degeen guddi heer wasiir ah, oo loo xil-saaray xal ka gaarista gunnooyinka ka maqan Xildhibaannada. Guddigaas ayuu sheegay Xildhibaanku inuu goluhu ka war dhawrayo. “Waxaan hubaa in ay xal keeni doonaan gudiga” ayuu yiri Xildhibaan Daqarre, oo Kalfadhi uga jawaabayey su’aal ahayd sida uu goluhu uga qancay dooddii uu ka qabay gunooyinkiisa.
Guddoomiyaha Guddiga Maaliyadda, Qorshaynta Xiriirka Caalamiga ah iyo Tirakoobka Baarlamaanka , Xildhibaan Muqtaar Xasan Maxamed, ayaa Kalfadhi u sheegay in aysan hadda jirin khilaaf u dhaxeeya Baarlamaanka iyo Xukumadda. “Xukumadda iyo Baarlamaanku isma haysataan hadda, doodana waa la soo gaba-gabeeyay” ayuu yiri Xildhibaan Muqtaar.
Xildhibaan Maxamed Bashiir Daqarre ayaa, isaga oo u muuqda inuu difaacayo waxa Madaxweyne Waare ku riixay inuu Golihiisa Wasiirada ka dhigo Xubnaha Baarlamaanka, waxa uu sheegay in go’aanka uu qaatay Waare uu u madax-banaanaa, cid iyo daruuf qasabtayna aysan jirin. “Madaxwaynuhu isagaa xakh u leh in uu wasiir ka dhigo cida uu doono” ayuu yiri Xildhibaan Daqarre. Xildhibaan Muqtaar Xasan Maxamed, oo isna aragtidaas taageeraya, ayaa yiri “xildhibaanku waxa uu qaban karaa kaliya waa Wasiir”.
Madaxweynaha Maamulka Hirshabelle, Maxamed Cabdi Waare, ayaa labadii todobaad ee la soo dhaafay wajahay dhaliil iyo xiisad siyaasadeed, oo kaliftay in todobaad gudahii uu laba jeer isku shaan-dheeyo Golaha Wasiirada Hirshabelle, taas oo ka dhalatay cadaadis kaga imaanayey Golaha Wakiillada Hirshabeelle, oo sida la rumeysan yahay ku haysta Waare gunnooyinkooda iyo inuu ku daro xukumadda.